साहित्यकार,पत्रकार साफी चौधरीको उपचारको लागी आर्थिक अभाव/सहयोगको याचना। – Easykhabar : Get News Easily
कृष्णपुर नगरपालिका वडा नं. ६ सिंहपुर कञ्चपुरकी साहित्यकार साफी चौधरीको उपचारमा समस्या भएको छ ।पैसाको अभावले उनको उपचारमा समस्या भएको हो ।
२२ वर्षिय उनको ब्रेनमा पानी जमेकोले अपरेसन गर्नु पर्ने देखिएको छ । हाल उनको विकेकानन्द हस्पिटल लखनउमा उपचार भइरहेको छ । आर्थिक अवस्था कमजोरका कारण अपरेसन गर्न समस्या परेको वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष नथ्थु चौधरीले बताए ।
#विस्तृत जानकारीको लागि: सागर कुस्मी, 9848470060 धनगढी कैलाली ।